March 16, 2020 3569
आफ्नो बुवा आमाको नि’धनको शो’क कहाँ सजिलै बिर्सिन सकिन्छ र ? अमेरि’काको अर्कान्ससमा बस्ने एकजना युवतीलाई पनि बुवाको नि’धनको शोक`ले लगातार ४ वर्षसम्म पिरोलि’रह्यो । धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्दछ, तर उनले मृ तक बुवा’को यादमा बुवाको मोबाइल नम्बरमा हरेक दिन एउटा मेसे’ज पठाइरहिन् ।
पूरै ४ वर्षसम्म उनले मृ तक बुवा’को मोबाइल नम्बरमा मेसेज पठाइन् । एकदिन अचानक उक्त मो’बाइल नम्बरबाट उनलाई जवाफी मेसेज आयो । मृ तक बुवाको मोबाइ’ल नम्बरवान मेसेज ? उनी अवाक् नहुने कुरै थिएन ।गत अक्टो’बर २४ का दिन २३ वर्षीया च्यास्टटी प्याटर’सनका बुवा’को चौथो वार्षिकी थियो । हरेक दिनजस्तै उनले उक्त दिन पनि आफ्ना स्वर्गीय पिताको मोबा’इलमा सन्देश पठा’इन् । उनले लेखिन्, ‘हेल्लो बुवा, म छोरी हुँ । आ’जको दिन फेरि निकै मुस्किल हुनेवा’ला छ ।
तपाईंलाई गु’माएको चार वर्ष भयो । तर तपाईं’को सम्झना नआएको कुनै दिन छैन । म’लाई माफ गर्नुहोस्, तपाईंलाई जब मेरो सबैभन्दा धेरै जरुरत थियो, म त’पाईंसँग थिइन ।’यस्तै यस्तै लामो मेसेज उनले मृ तक बु’वाको मोबाइ’ल नम्बरमा पठाइन् ।उनले आफूले ग्रा’जुएसन गरेको तथा क्यान्स’र पनि निको भएको कुरा समेत उल्लेख गरिन् । मृ तक बुवाला’ई मेसेज पठा’उने उनको दैनिकी थियो ।
नि’धन भैसकेका बुवा’बाट जवाफ आउने कुनै अपेक्षा तथा सम्भावना पनि थिएन । तर, त्यसदिन भने च’मत्कार नै भयो । उनले बुवालाई मेसेज पठाएको नम्बर’बाट उनको मेसेज’को जवाफ पो आयो । उक्त जवा’फी मेसेज निकै आश्चर्यज:नक र मा’र्मिक थियो ।जवाफ”मा लेखिएको थियो, ‘हे प्यारी, म तिम्रो बुवा होइन । तर तिमीले चार वर्षदेखि पठाएका सबै मेसेज मै’ले प्राप्त गरेको छु ।
मेरो नाम ब्राड हो र सन् २०१४ मा भए’को एक कार दु’र्घटनामा मैले मेरी छोरी गु’माएको थिएँ । तिमीले पठाएका सन्देशले म बाँ’चेको छु । जब तिमी मे’सेज गर्दछौं मलाई लाग्दछ यो भगवान’ले प’ठाएको सन्देश हो ।’अगाडि लेखिएको थियो, ‘मैले वर्षौँदेखि तिम्रा मे’सेज पढिरहेको छु । तिमी अगा’डि बढिरहेको देखेको छु ।
तिम्रा मेसेजको सुरुमै जवा’फ दिन चाहन्थेँ तर मैले तिम्रो मन दुखा’उन चाहन्नथेँ । तिमी एक असा’धारण छोरी हौं र मलाई विश्वास’ छ मेरी छोरी आज जिवित हुँदिहुन् त तिमी’जस्तै हुने थिइन् । हरे’क दिनको अपडेटका लागि तिमी’लाई धन्यवाद ।’ यो अद्भुत तथा आश्च’र्यजक घ’टनाका बारेमा चेस्टटीले आफ्नो फेस’बुकमा शेयर गरेकी छिन् ।
उनले आफूले बुवा’लाई पठाएको मेसेज र उताबाट प्राप्त जवाफको स्कृन’शटसमेत पोष्ट गरेकी छिन् ।२५ अक्टोबरमा गरिएको यो पोष्टलाई अहिले’सम्म लाखौँले शेयर गरिसकेका छन् । धेरैजना भा’वुक भएका छन् र ती युव’तीलाई अ’गाडि बढ्न शुभकामना दिएका छन् ।
Prev१० वर्ष र १५ महिनाका छोराहरुको काख’बाट खोसेर, छोराकै अघि यसरि भयो आमाको ‘ह`त्या (भिडि’योसहित)
Nextफेसबुकमा यस्तो स्टाटस लेखे’को तीन घण्टामै संसार छा’डे नविनले
दुःखद खबर: नेपालमा कोरोनाले थप १ जनाको मृ’त्यु..